Fekitori Kuratidzwa - Nanjing Zhitian Mechanical Uye Magetsi Co, Ltd.
Tine timu yehunyanzvi yakarongedzwa neakakwira giredhi chaiyo michina senge dijitari inoginha chigayo, inodzorwa musina kusimba muchina, nhamba inodzorwa gorofa-dombo chigayo pamwe nenzvimbo yekugadzirisa.
1. Inokurumidza uye yakanyatsojeka.
2. Dhijitari michina ine yakawanda-basa kusimudzira kuwanikwa kwechigadzirwa.
3. Maitiro kumberi kwepuratifomu paunenge uchigadzira kumashure kwepuratifomu.
4.Kuchengetedza kwakasimba basa kuomarara uye diki remukati kusagadzikana nekuunza tekinoroji yekuzvidzora-yakagadziriswa kutonga; Zvichakadaro, hupenyu hwevatema uye hunogadzira hunyanzvi hwakagadziridzwa zvakanyanya.
5. Kuputsika kuzviongorora-wega uye kugadzirisa pachako basa kunoshandiswa.
6. Modularization, standardization uye yunifomu kune Hardware dhizaini akagadziriswa.
Tine yakakwana yekuyedza sisitimu ine izere nemazvo kuyedza zvishongedzo, uye timu yehunyanzvi yemhando yeinjiniya ine-yega-basa vanhu vakarovedzwa kuongorora.
Marl kureba chinongedzo, iko chaiyo kunogona kusvika kusvika 0.1μm, inova nguva mazana maviri ekurongeka neyakajairwa bvunzo bvunzo.
Kwayedza system inoshanda kune kuomarara kuyedza kwezvigadzirwa zvakagadzirwa kubva kwakasiyana zvigadzirwa, izvo kukanganisa kwechiratidzo kuri pasi peyakajeka uye isina kunaka 6HLD, iko kudzokorora kukanganisa kuri pasi pe6HLD.
3.Kudzvinyirira Kuramba Kwayedza
Guarantee kuomarara kwebhari yemvura kutenderera system.
Yakakwana chigadzirwa kuyedza, simbisa zvigadzirwa zero kukanganisa, zero kukuvara.
5.Gearbox Debug Platform
Bvunzo zvigadzirwa zvinomhanya pasi peyakafananidzwa kesi.
Tex65aii Screw Chikamu, Plastiki Extruder Screw Barrel, Screw Barrel Yekuwedzera, Mabhiramu Epa Twin Screw Extruder, Kaviri-Screw Extruder, WR15E mugodhi,